नेपालमा क्रिकेट रंगशाला बनाउने कतारको इच्छा, भ्रमण बर्ष २०२० मा सहयोग गर्ने ! – Life Nepali
नेपालमा क्रिकेट रंगशाला बनाउने कतारको इच्छा, भ्रमण बर्ष २०२० मा सहयोग गर्ने !
काठमाडौँ। नेपालका लागि ‘कतारका’ राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हैलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित’ सभामुखको का’र्यकक्षमा सोमबार भएको भेटमा राजदूत युुसुुफले स’भामुख सा’पकोटालाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको’ शुुभकामना व्यक्त गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले ४२ बर्षदेखि नेपाल र क’तारबीच मित्रवत सम्बन्ध रहेको स्मरण गर्दै यस्ता’ भेटले’ सम्बन्धथ’प सुुदृढ हुने वि’श्वास व्य’क्त गरे।
उनले भ्रमण बर्ष २०२० मा सहयोग गर्ने क’तारको प्रतिब’द्धताप्रति ध’न्यवाद पनि ज्ञापन गरेका छन्। सभामुखले सन् २०२२ मा कतारले आयोजना गर्न लागेको वि’श्वकप फुु’टबलको स’फलताको शुभकामना व्य’क्त गरे। उनले वि’श्वव्या’पी रुपमा देखिएका जल’वायु प’रिवर्तन ल’गायतका समस्या समाधनका लागि ने’पाल र कतारले संयु’क्त रुपमा प’हलकदमी लि’नुुपर्ने बताए।
भेटमा रा’जदूत युु’सुफले सन् २०२२ मा क’तारमा आयोजना हुने वि’श्वकप फुुट’बलको तयारीमा क’तारमा कार्यरत नेपाली श्रमि’कले ठू’लो यो’गदान गरिरहेको बताए।
उनले नेपाली बिमानस्थलमा पार्किङको अभावका का’रण कतार एयरलाइन्सले घाटा बेहोर्नुपरेको जानकारी गराउँदै यहाँको एयरपोर्ट सुधारमा सहयोगगर्न कतार तयार रहेको बताए। राजदूत युसुफले नेपाल र कतारबीच भएको श्रम स’म्झौतालाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गर्न कतार तत्पर रहेको बताए। उनले नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “हामीले नेपालमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा पनि सहयोग गर्न चाहेका छौं”, राजदूत युुसुुफले भने।
Previous २६ वर्षीय युवतीको ५६ वर्षे बोससंग अफेयर भएपछि युवतीले पाइन यस्तो सजाय’
Next ठूलो संख्यामा नेपाली कार्यरत खाडी मुलुकमा पनि देखियो को’रोना भा’इरस !